သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: April 2007
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:22 PM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကောင်းကင်ဟာ အပြာရောင်တောက်တောက် ကြည်လင်လှပ၊ ငှက်တို့ပျော်ကြတဲ့နေ့…
ခြံထဲက ပန်းကလေးတွေ လေယူရာယိမ်းတဲ့နေ့..
တခြားသူတွေအတွက်တော့ ထူးထူးခြားခြားနေထီးဆောင်းတဲ့နေ့..နေထီးအ၀ိုင်းက ကြီးလွန်းလို့ ကင်မရာထဲ ၀င်အောင် မနည်းချိန်ရင်း မြက်ခင်းစိမ်းပေါ် အိပ်ပြီးရိုက်ရတဲ့ အခြေအနေရောက်သွားတော့ ကောင်းကင်ပြာကို နောက်ခံထားလို့ လွတ်လပ်စွာ ပျံဝဲနေတဲ့ လိပ်ပြာဖြူလေးတွေကို ကလေးဘ၀ကလို ပြန်လည်ငေးမောခွင့်ရခဲ့ပြန်တယ်။
တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ မြင်နေကျ ခုနှစ်လွှာသက်တန့်ရဲ့ သာမန်နေ့လေး တစ်နေ့..။ လူတွေကတော့ ယုံကြမယ်မဟုတ်ဘူး..နေ့စဉ်လိုလို၊ ကိုယ်..သက်တန့်မြင်တယ်လို့ ဆိုရင်..။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့ ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းကြောင့် အုန်းပင်ပျိုရယ်၊ နှင်းဆီနှစ်ပင်ရယ်၊ fig အသီးပင်နှစ်ပင် သေဆုံးသွားပြီ။ မိုးကြိုးပစ်ခံရသလို မဲကျစ်နေတဲ့ fig အပင်လေးနှစ်ပင်ကို နစ်မျောတသ ကြည့်နေမိတဲ့နေ့ လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ ခြံထဲမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ နွေဦးပေါက်ရင် ထွက်လာလေ့ရှိတဲ့ ယုန်ညိုလေးသားအမိလဲ ကိုယ်မတွေ့တော့ဘူး။ ဘယ်ကိုများပြောင်းရွှေ့သွားပြီလဲ။ ဒါမှမဟုတ်..ဒီဆောင်းကို မကျော်နိုင်လို့များလား။ တစ်နေရာရာကို ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါစေလို့ ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိတယ်။
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အနည်းငယ်စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်တဲ့နေ့။ သူစိတ်ပျော်ပါစေလို့ ရယ်ရွယ်ပြီး နေထီးဆောင်းတဲ့ပုံလေး တင်ပေးလိုက်တယ်။ အလုပ်က ပါဝါနက်ပ် ယူအပြီးကြည့်လို့ရအောင်..။ မှတ်ကျောက်အတင်ခံရတဲ့ သေးငယ်တဲ့ စမ်းသပ်ခံရမှုလေးတစ်ခုလို့ သူယူဆနိုင်ပါစေ။
ကောင်မလေးကို ပေးဖို့ထင်တယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်းတဲ့ မောင်လေးတစ်ယောက်အတွက် ပန်းသီးပင်က ပန်းလေးတွေလဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်သလို ခူးယူပါ.. ဒီနှစ်ပန်းသီး လေး၊ငါး၊ဆယ်လုံး ကျန်ရင်တော်ပါပြီ။ ပန်းသီးငါးပိချက် ချက်စားရရုံကျန်ရင် ကျေနပ်ပါတယ်။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:29 AM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ခံစားချက်, ပန်းလက်, ရှုခင်းများ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:23 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:32 AM 12 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
02-04-2007 နေ့ထုတ် မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာ ပန်းသတင်းဂျာနယ် အမှတ် ( ) ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိလိုက်ကြောင်း ဂျာနယ်ပါအချက်အလက်တွေကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချက်အလက်တွေထဲက ‘‘မကာအို ဟိုတယ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကောလိပ်က မြန်မာကျောင်းသား 800 ခန့် ခေါ်ယူမည်‘‘ ဆိုတဲ့ အချက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတော့ ....
Please click HERE for detailed post by MyanmarPyiThar.
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 4:13 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:59 AM7comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ငု နဲ့ ကံ့ကော်ကိုလွမ်းတယ်..
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:35 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ဆုမွန်ကောင်း, ရှုခင်းများ
ဘလော့ဂ်စာအုပ်နောက်မှာ ဒီလိုမျိုး gist ရေးပြီး ဘလော့ဂ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ မရင်းနှီးဖူးသေးသူတွေကို အကြမ်းဖျင်း အဓိပယ်ဖွင့်ဆိုပြကြရင်ကောင်းမလားလို့ပါ..
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 7:45 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 1:24 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ